China Yakarukwa waya pajira riya gasi firita faira pajira riya rakasiyana zvinhu Kugadzira uye Fekitori | Hanke
Dzakarukwa waya pajira riya gasi mvura firita pajira riya nezvimwe zvinhu
kudengenyeka & kuvhunduka kunwiwa, mweya & kusefa kwemvura, gasket & kuiswa chisimbiso, kupisa kupisa & kuputira. Inokodzera peturu, makemikari, maindasitiri, mishonga, michina, kuvaka ngarava, mota, matarakita maindasitiri senge distillation, kusefa mafirita, uye anoshandiswa semotokari yemhepo firita.
Yakarukwa mesh-yakachena inogadzirwa nesimbi waya, inozivikanwa segasi remvura yekuparadzanisa firita mesh, iri mhando tambo mesh mune yakasarudzika fomu. Zvikamu zvaro zvikuru zvinoshandiswa muinjiniya senge injini yekudzora ruzha uye mekutangisa kushamisika, uye zvakare inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yemotokari uye indasitiri yemagetsi.
Wire dhayamita Specification dungwerungwe: 0,08 ~ 0.3mm sandara waya kana kumativi waya. Imwe-tambo kuruka, tambo dzakasiyana-siyana kuruka, simbi waya uye isiri-yesimbi waya (dzakasiyana tambo) kuruka, nezvimwe.
Yakarukwa mesh cleaner ndiyo inonyanya kushandiswa mhando pakati pezvinhu zvese zvakarukwa meshes.
Yakarukwa mesh cleaner inogona kugadzirwa nemon-filament kana yakawanda-filament. Mono-filament yakakoswa mesh ndiyo yakapusa mhando, iyo inogona kushandiswa mune zvakajairika mashandisirwo uye iyo yakawanda-filament yakarukwa mesh ine simba rakakwirira, iro rinogona kushandiswa mune rinorema basa kunyorera.
Yakarukwa mesh inosuka inogadzirwa uchishandisa nzira yekuruka uko mesh inoumbwa kubva kune akateedzana ezvipenga zvinopindirana. Iyo yekutanga simbi isina simbi yakarukwa pajira rakapetwa kana gadzira zvakakwana, asi inogona kuitwa ginning rakarukwa mesh nemuchina zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Ginning yakarukwa mesh ine akasiyana maumbirwo, upamhi uye kudzika kwekubhinya, iyo inogona kukodzera zvimwe zvinoshandiswa. Kuwedzera, isina simbi yakarukwa mesh inogona kumanikidzwa kuita yakadzvanywa yakarukwa mesh kuti ive nani kusefa kugona.
Dzakarukwa mesh-cleaner / Gasi Liquid Separator Filter Mesh
Mashoko Stainless simbi waya, Mhangura waya, Brass waya, Nickel waya, Titanium waya, Monel waya, kwakakurudzira waya, etc.
Rudzi rwakarukwa Crochet kuruka
Waya dhayamita 0.08-0.5mm, kazhinji dhayamita iri 0.20-0.25mm
Upamhi 40mm, 80mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 600mm, nezvimwe
Hole saizi 2x3mm-4x5mm-12x6mm
Pamusoro mhando Yakapetwa, Ginning
Muenzaniso Hole uwandu uye upamhi Waya dhayamita
(mm) Zvishandiso Kurema
(makirogiramu / m2)
Mhando yemhando 40-100mm 0.1X0.4 1Cr18Ni9 1 / 0.5
60-180mm 0.1X0.4 1Cr18Ni9 1 / 0.5
140-400mm 0.1X0.4 1Cr18Ni9 1 / 0.5
40-100mm 0.27 Kwakakurudzira Lead waya 1 / 0.7
40-100mm 0.1X0.4 Tsvuku tsvuku waya 1 / 0.7
Rinobudirira mhando 70-100mm 0.1X0.3 Stainless simbi waya 1 / 0.6
80-100mm 0.1X0.3 Stainless simbi waya 1 / 0.6
90-150mm 0.1X0.3 Stainless simbi waya 1 / 0.6
200-400mm 0.1X0.3 Stainless simbi waya 1 / 0.6
60-100mm 0.1X0.5 Stainless simbi waya 1 / 0.6
Yakakura kuruka mhando 30-150mm 0.1X0.4 Stainless simbi waya 1 / 0.4
70-400mm 0.1X0.4 Stainless simbi waya 1 / 0.4
Pashure: Flame proofing waya mesh ss mesh ine furemu China fekitori
Zvadaro: Monel / inconel / hastelloy waya mesh alloy firita mesh ine 1-300mesh
Stainless simbi waya pajira riya dzakarukwa micro waya pajira riya ...